Dawladda hoose ee Galkacyo oo bilawday hawlgallo nadaafadeed iyo maamulka oo bulshda ka codsaday dhawriska saxada magaalada. – Radio Daljir
Dawladda hoose ee Galkacyo oo bilawday hawlgallo nadaafadeed iyo maamulka oo bulshda ka codsaday dhawriska saxada magaalada.
Galkacyo, Oct 23 -Maamulka dawladda hoose ee degmada Galkacyo ayaa saaka bilaabay hawlo nadaafad iyo bilicayn magaalo iskugu jira kaddib markii roobabkii xoogganaa ee magaalada ka da’ay ay sameeyeen biyo dhig baahsan.
Hawlgal-nadaafadeed xooggiisa ayaa laga bilaabay xerada Dayax ee magaalada Galkacyo oo ah xero ballaaran oo ay ku yaalliin suuqyo ganacsi oo kala duwan sida qudaarta, dharka, caanaha iyo hilibka, waxaana halkaasi ceegaagay dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey biyo ka dhashay roobabkii da’ay, is-baddal xagga saxada ahna abuuray.
Shaqaalaha dawladda hoose ee Galkacyo ayaa saaka hiirtii waabari bilaabay hawlgalka nadaafadeed oo labo waji lahaa kaasoo qayb ahaan matooro lagu jiidayey biyaha fadhiya jidadka, halka dhinaca kale baabuur lagu daabulayey haraaga-qashineed ee ka dhashay raxmaddii hoortay.
Duqa magaalada Galkacyo Siciid Cabdi Faarax, oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xerada Dayax dhaxdeed ayaa faah-faahiyey ujeeddooyinka durugsan ee ay uga golleeyihiin tallaabo qaadistoodaan, waxaana uu sheegay in ay iskugu jirto dhawrista bilacda magaalada iyo kor-u-qaadidda nadaafadda si looga hortago cuduro ka dillaaca dugsashada biyaha ceegaaga waddooyinka magaalada.
Duqu, waxaa uu bulshada Galkacyo u soo jeediyey in ay ku dadaalaan dhawrista iyo illaalinta saxada guud ee magaalada si ay uga nabad-galaan xanuuno ay suurtagal yahay in ay ku soo gabbadaan qashinka iyo nadaafadda darrada.
Tallaabooyinkaan maamulka dawladda hoose ay ka wadaan magaalada Galkacyo kuna aaddan nadiifinta magaalada ayaa yimid xilli roobab xooggan oo Galkacyo ka da’ay ay reebeen biyo ku qolaysmay inta badan jidadka magaalada.